सम्बन्धको मूल्य दुईचार लाख भए कुमारीको मूल्य कति दिन्छौ ? - inaruwaonline.com
मंगलबार, आषाढ २१, २०७९
सम्बन्धको मूल्य दुईचार लाख भए कुमारीको मूल्य कति दिन्छौ ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक १०, २०७२ समय: ९:००:३६
विजया पन्त । मेडम नमस्कार, निन्याउरो अनुहार अनि बनावटी हाँसोसहितको बोली । श्रीङ्गारविहिनको अनुहार फुङ्ग उडेको, १६÷१७ वर्षको उमेर उसमा कुनै चमक छैन, सामान्य लुगा, दुबै हातमा चुरा छैन । उसलाई देख्ने बित्तीकै उसको २ वर्ष अगाडिको अनुहारको याद भो ।
एक निमिसमै २ वर्ष र अहिलेको अनुहार तुलना गरेँ । लाग्यो उसमा हिजोको जस्तो चञ्चलापन छैन न त उत्साह, उमङ्ग नै छन् । उसको शिरदेखि पाउसम्म नियाले पछि सोध्न मन लाग्यो । के छ तिम्रो खबर ? कुनै धकविना नै भनी, मेडम मेरो त सम्बन्ध विछोड भो । उसलाई यो शब्द भन्न जति सजिलो भो मलाई सुन्न त्यति नै गाह्रो भो । उसँगको ४÷५ मिनेटको भलाकुसारी पछि छुट्टिएँ ।
मेरा मनमा धेरै कुरा खेल्न थाले । आजकल विवाह र सम्बन्ध विछोड कति सजिलो छ ? के विवाह लुगाफेरे जस्तो हो ? एउटा लुगा किनेर ल्याएपछि यता सानो भो, यता कस्सियो । थोरै रङ मन परेन भो अर्को किन्छु यो फाल्छु । डमीमा लगाइदिएको कपडा हो र ? विवाह । कति सस्तो र सजिलो विवाह र सम्बन्धविच्छेद ? पारपाचुके, सिनकिधागो भनेर बुझिने सम्बन्धविच्छेद आजकल म्ष्खयचअभ भनिन्छ । हुन त अंग्रेजीमा बोलेपछि त्यसको अर्थ पनि डलरमा हुन्छ कि ? जे सुकै होस् । बच्चैमा सम्बन्ध विछोड, पारपाचुके, सिन्किधागो जस्ता शब्द सुनेकी म यो शब्दसँगै डर लाग्थ्यो र आज पनि कसैको सम्बन्ध विच्छेद भो भने पछि जीवनका पाटा पल्टाउन मन लाग्छ । आज जानेर, बुझेर, मन परेर विवाह गर्ने अनि २÷४ वर्षमा सम्बन्धविच्छेद हुने ? हुन त म यसो भनिरहदा कानुनको विरोधी बनुला, अधिकारको विरोधी बनुला तर म यी कुराको विरोधी होइन मेरो संस्कार र कानुनसँग नमिलेका कुराको विरोधी भने हुँ ।
हिन्दु संस्कारअनुसार विवाह गर्दा विवाह मन्डपमा अग्नी साक्षी राखेर, लगन जुराएर, स्वयम्वरको औठी र माला लगाएर, सिन्धुर हालेर गरेको विवाह अदालती कागतले अन्त्य गर्ने देखेर कता कता संस्कार र कानुन नमिलेको हो कि ? भन्ने हुन्छ । कागजमा जोडेको नाता हो र ? कागजमै अन्त्य हुने ? कस्तो छ, नाता जोड्दा हिन्दु धर्मको संस्कार र अन्त्य गर्दा कानुनको संस्कार ?
काम विशेषले मालपोत कार्यालयको लेखनदासकोमा पुगेकी म, एक जना महिला १७÷१८ वर्षकी छोरी लिएर त्यहाँ आइपुग्नु भो । कुरा चल्न थाल्यो, बाबु आएनन्, ठूलो बा भए पनि आउलान् । म अवाक भएर कुरा सुनिरहे तर मनमा भने खुलदुली लागिरह्यो । महिला त्यहाँबाट हिडेपछि खुल्दुली मेटाउन मैलै सोधे के हो र ? आमाको सम्बन्ध विछोड भएको हो तर छोरी आमासँग बस्छिन् । छोरीको नागरिकता बनाउन बाबु चाहियो । आज नागरिकतासम्म दिन नसक्ने तिमीले कस्को सन्तान हुर्काएकी हौ ? कानुनले श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध तोडे पनि सन्तानको सम्बन्ध त तोडिन सकेन ।
तिमीले कागजमा पो सम्बन्धविच्छेन गरिछौ मनमस्तिष्कमा त गर्न सकिनौ नि । जस्को सन्तानलाई काखमा लिएर बसेकी छौ हरपल त्यही सन्तानले दुई जनाको सम्बन्ध जोडिदिएको छ र सुत्दा, उठ्दा मनमस्तिष्कमा ठेस पु¥याएको छ भने कसरी सम्बन्धको विछोड भो ? कागजमा भएपनि मानसिक रुपमा हुन सकेन । हुन त पीडा आआफ्नै हुन्छ तर सम्बन्धको विछोड गरेर पनि त मानसिक रुपमा ऊसँगको सम्बन्धबाट छुटकरा पाउन सकिनौ । बाबु, छोरी र आमाको सम्बन्धले तिम्रो आँखामा आँसु त भरिन्छ नै छोरीले जीवनभर आमा र बुबाको नाम लेख्दा दुईको सम्बन्धलाई पनि जोडेकै हुन्छ नि । यो त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हो । यस्ता हजारौँ छन् ।
सन्तान जन्मेका महिला र पुरुष मात्र होइन भर्खर विवाह गरेर सुनौलो सपना बोकेका दम्पती पनि सम्बन्धविच्छेद गरेर एकअर्कामा स्वतन्त्र हुन खोजेका छन् । कतै केटीको इच्छाले त कतै केटाको इच्छाले सम्बन्धविच्छेद गरेका उदाहरण पाइन्छन् । हुन त कानुनमा केटीको इच्छा बेगर सम्बन्धविच्छेद हुँदैन तर केटीलाई मेरो चाहनाले सम्बन्धविच्छेद गर्न खोजेकी हुँ भन्ने नाटक गर्न लगाएर सम्बन्धविचछेद गराइन्छ । जव एक एर्कामा मेल हुँदैन सँगै बस्न पनि गाह्रो हुन्छ ।
सानातिना कुरामा सम्बन्धविछोड गर्दा हाम्रो संस्कारमा केटा मान्छेलाई त सजिलो हुन्छ तर केटीलाई सजिलो छ ? यो समाजमा हिजो जस्तै माग्न आएर जग्गेपुजेर फेरी तिम्रो विवाह हुन सक्छ न त तिमी हिजो जस्तो कुमारी बन्छ्यौ ? जसरी सम्बन्ध विच्छेद गरेको केटाको हुन्छ । केटीले सम्बन्धविच्छेद दिनु भनेको केटालाई छुटकरा दिनु हो । सकछेउ भने बसन उसलाई छोडेर किन सम्बन्धविच्छेद नै गर्न पर्छ र ? हुन त सम्बन्धविच्छेद गर्दा २÷४ लाख पैसा त पाइन्छ तर कुमारीत्व लुटिइ सकेकी हुन्छ्यौ । सम्बन्ध विच्छेद पछि कुमारीत्व लुटिएकी कुमारी बनेर न त माइतमा बाबुसँग अधिकार रहन्छ न त लाग्नेसँग न त समाजको आँखामा कुमारी बन्न सक्छ्यौ ?
पुरुष तिमीसँग कुमारत्व नै हुँदैन त्यसैले त्यसको मूल्य पनि थाहा हुँदैन । तर तिमी फेरी सम्बन्धविच्छेद भएको केटीसँग बाजा बजाएर गौरवको साथ विवाह गर्न पनि सक्दैनौ । सम्बन्धको मूल्य दुईचार लाख भए कुमारीको मूल्य कति दिन सक्छौ ?साझासवालबाट ।
पेशा र समाजसेवा संगसगै लाने मेरो प्रतिवद्धता: डा. बालकृष्ण साह
देशभरि नै नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनले माहोल तताएको छ। अझ नेपाली कांग्रेसको गढ मानिने सुनसरी जिल्लामा महाधिवेशनको छुट्ट...
राजनीतिले नागरिक अनि राज्यलाई जोड्छ: केन्द्रीय महाधिवेसन प्रतिनिधी अधिकारी
राजनीतिले नागरिक अनि राज्यलाई जोड्छ । राजनीति नागरिक जीवनलाई सहज बनाउन समाजमा लुकेको शक्तिको खोज, संकलन, प्रस्फुटन गर्ने...
कामले नै काम सिकाउँछः बलराम आचार्य, गोरखा डिपार्टमेन्ट (भिडियो)
गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोर पुर्वको ठुलो डिपार्टमेन्ट स्टोरको सञ्जाल हो। यसका सञ्चालक तथा संस्थापक बलराम आचार्य हुन। सानो प...
अरुण तेस्रो परियोजनामा समेत बन्धन सिमेन्टको प्रयोगः हरिवंश राठी
बन्धन सिमेन्ट पुर्वी नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग हो । अत्याधुनिक प्लान्टबाट उत्पादिन बन्धन सिमेन्ट गुणस्तरमा सम...
चैत १ र २ गते इनरुवामा प्रदेश स्तरीय बैश्य सम्मेलन हुने (भिडियो)
समूहमा रकम उठाएर विजुलीको पोल ल्याएपनि बती बाल्न पाएनन्
श्रीलंकाटाप्पु। सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका ९ का रामविलास चन्द्रबन्सी ३८ वर्षको पुग्नुभएको छ तर वहाँले अहिलेसम्म घरमा...
कांग्रेस नगर सचिवद्धारा पार्टी परित्यागको घोषणा
जेल फिल्ड संचालनको माग गर्दै नगर प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र
सुनसरीका उराँव युवालाई व्यवसायीक खेलाडी बनाउदै उराँव प्रतिष्ठान
घाट निर्माणमा सहयोगको आग्रह गर्दै नगर प्रमुखलाई ज्ञापन
सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुलाई इनरुवामा सम्मान
इनरुवाको बजेट झण्डै ७४ करोड
भाेक्रहा नरसिंहका उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई गाउँपालिका सेवा पुरस्कार